I-modeling DNA - Ulwakhiwo, Umsebenzi kunye nokuPhenduka
Ukwakha imodeli ye- DNA yindlela enhle yokufunda malunga nesakhiwo seDNA, umsebenzi kunye nokuphindaphinda. I-DNA imizekelo ibonisa isakhiwo seDNA. Ezi zibonakaliso zingaba imodeli engokwenyama eyenziwe ukususela malunga naluphina uhlobo lwamaxwebhu okanye ingaba yimodeli eyenziwe ngekhompyutha.
Iimodeli zeDNA: Ulwazi olusemva
I-DNA imele i-deoxyribonucleic acid. Ihlala ngaphakathi kwiseli yeeseli zethu kwaye iqulethe ulwazi lofuzo lokuvelisa ubomi.
Isakhiwo seDNA safunyanwa nguJames Watson noFrancis Crick ngawo-1950.
I-DNA luhlobo lwe-macromolecule eyaziwa njenge- nucleic acid . Yinto efana ne- helix kabini ephihliweyo kwaye iqulethwe ngamacu amade okutshukela okutshintshana kunye namaqela e-phosphate, kunye neziseko ze-nitrogen (adenine, thymine, guanine kunye ne-cytosine). I-DNA ilawula umsebenzi weselula ngokubhala ikhowudi yokuvelisa i-enzyme kunye neeprotheni . Ingcaciso kwi-DNA ayiyi kuguqulwa ngokuthe ngqo ibe ngamaprotheni, kodwa kufuneka kuqala ikopishwe kwi- RNA kwinkqubo ebizwa ngokuba yi- transcription .
Iimodeli ze-DNA zingakhiwa phantse nantoni na kubandakanywa i-candy, iphepha, kunye neengubo. Into ebalulekileyo ukuba uyikhumbule xa ukha umzekelo wakho ukuchonga izixhobo ozakuzisebenzisa ukumela iziseko ze-nucleotide, i-molecule ye-sugar, kunye ne-phosphate molecule. Xa udibanisa iimbini ze-nucleotide zisezantsi maziqiniseke ukuba zidibanisa ezo zibini ngokwemvelo kwi-DNA.
Ngokomzekelo, iimbini ze-adenine ne-thymine kunye ne-cytosine zibini kunye ne-guanine. Nazi izinto ezintle kakhulu zokwakha i-DNA model:
Iimodeli zeDNbhodi zeDNA
I-DNA Jewelry Model
Iimodyuli zeDNA: iiProjekthi zeSayensi
Kwabo abanomdla ekusebenziseni i-DNA imizekelo yeeprojekthi ezifanelekileyo zenzululwazi, khumbula ukuba ukuzakhela imodeli kungekhona nje ukuzama.
Iimodeli zingasetyenziswa, nangona kunjalo, ukuphucula iphrojekthi yakho.
Abaprofeti baseRoma bamandulo
USir John John Falstaff: Uhlalutyo loBantu
I-10 yokwakha izakhiwo zomzimba ukuphumeza ukwakha umzimba
Ukuqonda i-Social Exchange Theory